Guddoomiyaha Baarlamanka F. S. oo la kulmay saraakiisha ciidanka Booliiska Soomaaliyeed – Radio Muqdisho
Guddoomiyaha Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa kulan la qaatay saaraakiil ka tirsan ciidanka Booliska Soomaaliya, kuwaas oo tababar aqoon kororsi ah uga socdo magaalada Muqdisho.
Kulankan guddoomiyaha Baarlamanka Prof. Maxamed Sheekh Cismaan “Jawaari” uu la qaatay saraakiisha booliiska ee gobollada dalka ayaa looga hadlay, sugidda amniga iyo ilaalinta midnimada booliiska Soomaaliyeed oo loola jeedo ineysan saameyn ku yeelan siyaasadaha ka jira gobollada dalka.
Guddoomiyaha baarlamanka Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Sheekh Cusmaan “Jawaari” oo kulanka ka hadlay ayaa kula dardaarmay saraakiisha ciidanka Booliiska Soomaaliyeed iney ka shaqeeyaan isku xirnaanta ciidanka booliiska Soomaaliyeed , taasoo sida uu xusay qeyb ka qaadaneysa gudashada waajibaadka loo igmaday ciidanka Booliiska.
S/Guuto Axmed Dayib “Dhegacaleen” oo ka mid ah saraakiisha ciidanka Booliiska ayaa Radio Muqdisho u sheegay in guddoomiyaha Baarlamanka uu codsaday in uu la kulmo saraakiisha ciidanka, waxaana looga hadlay waajibaadka ciidanka iyo sidii loo fulin lahaa howlaha laga sugayo.
“Gudoomiyaha baarlamanka ayaa codsaday in uu la kulmo saraakiisha ciidanka booliiska Soomaaliyeed ee halkan ku kulansan, wuxuuna kala hadlay fulinta waajibaadka ciidanka iyo midnimada booliiska si uusan ciidanku u noqon mid meel ku xayiran” ayuu yiri S/Guuto Axmed Dayib “Dhegacaleen”.
Diyaargarowgi ugu dambeeyay ee Ciidul-fidriga oo ka socda dalka